Top 8 sữa rửa mặt tẩy tế bào chết chuyên dụng tốt nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 8 sữa rửa mặt tẩy tế bào chết chuyên dụng tốt nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ngokujwayelekile, uzosebenzisa isihlanzi ukuhlanza isikhumba sakho bese usikhipha ngomkhiqizo ojwayelekile. Kodwa-ke, ukuze unciphise ukulahlekelwa isikhathi, kunemikhiqizo eminingi yokuhlanza ubuso ezalwa nomsebenzi we-2-in-1 kokubili okugeza ubuso futhi ngokuphumelelayo. Ngakho ake sithole ukuthi yiziphi izinhlobo ukugeza ubuso obucwebezelayo Yeka ukuthi kulula kangakanani lokho!
1 Kungani kufanele usebenzise i-exfoliating face wash?
2 Okungu-8 okuphambili okugeza ubuso okugeza ubuso namuhla
2.1 1. ST.IVES Ubisi Lokuhlanza Amabhilikosi
2.2 2. Igwebu le-Innisfree Volcanic Pore elihlanzayo
2.3 3. I-Muji Face Soap Scrub
2.4 4. Utena Everish Exfoliating Cleanser
2.5 5. AHA Geza Ukuhlanza
2.6 6. Abanye Nge Mi Cereal Pore FoamCrub
2.7 7. I-CeraVe Renewing SA Cleanser
2.8 8. I-Cetaphil Extra Gentle Daily Scrub
3 Indlela yokusebenzisa i-exfoliating face wash ephumelelayo
Kungani kufanele usebenzise i-exfoliating face wash?
Nakuba nsuku zonke, abesifazane basebenzisa ukuhlanza okujulile, ukunakekelwa kwesikhumba kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba. Kodwa esinyathelweni exfoliating ngokuvamile ukhohliwe. Lokhu kubangela ukuthi izakhi zokunakekelwa kwesikhumba zingamuncwa ngokuphelele, okushiya isikhumba sinakekelwa futhi siba sibi nsuku zonke.
Lapho isikhumba esifile sihlanzwa, uzosusa isikhumba esimangelengele, esinombala ohlukile kunamaseli esikhumba aseduze. Izingqimba zokungcola nazo zisuswa ngokuphelele ngenxa yekhono layo lokuhlanza ngokuphelele. Ukwengeza, ukukhishwa njalo kwe-exfoliation kusiza futhi ukuvuselela umsebenzi we-collagen, okusiza ama-capillaries egazi ukuthi ajikeleze. Ngaleyo ndlela kuthuthukisa ukunwebeka kwesikhumba ukusiza isikhumba sibe plumper futhi bushelelezi.
Kunezizathu eziningi ezingenakuphikwa zokuthi kungani kufanele ukhiphe njalo. Kodwa kubantu abamatasa kanye nabantu abavilaphayo ukuqinisekisa ukuthi inqubo yokunakekelwa kwesikhumba efanele inzima kakhulu. Ngakho-ke, ukuqonda ukukhathazeka kwabesifazane, izinhlobo zezimonyo nazo ziqala imikhiqizo eminingi yokuhlanza ubuso enomphumela wokukhipha.
Okungu-8 okuphambili okugeza ubuso okugeza ubuso namuhla
Lapha, ake sithole izinto ezingu-8 ezinhle zokugeza ubuso ezicwebezelayo futhi sithole ukwethenjwa abantu abaningi.
1. ST.IVES Ubisi Lokuhlanza Amabhilikosi
I-ST.IVES ingumkhiqizo weqembu elidumile emhlabeni wonke i-Unilever emkhakheni wezimonyo, okuyinto engaziwa kwabesifazane abaningi. Ngenxa yokusebenza kwayo kanye nezithako ezithambile, ilungele abasebenzisi abaningi.
Njengegama lomkhiqizo, isithako esiyinhloko ekuhlanzeni amabhilikosi, anamavithamini avamile A, C, no-E. Ngesikhathi esifanayo, kufanelekile ukusho ama-walnuts, ama-cornstarch, anemiphumela emihle ekukhipheni isikhumba ngokuphumelelayo.
Kulula ukuyisebenzisa, izindleko eziphansi, kufinyeleleka kubasebenzisi abaningi.
Imikhiqizo yesikhumba esinamafutha abantu abanezimbotshana ezinkulu.
Ingasetshenziswa ngokuhlanganyela ukwelapha amakhanda amnyama kanye nokunciphisa uwoyela ngempumelelo.
Ukhilimu uwugqinsi impela, ngakho-ke udinga ukusebenzisa amandla aqinile ukuwubhucunga ukuze uphumelele.
Ubuhlalu be-massage bunzima kakhulu, ngakho-ke abufanele abantu abanesikhumba esibucayi
Kudingeka usebenzise okokuthambisa abantu abanesikhumba esomile usebenzisa i-ST.IVES cleanser.
Okwamanje, ulayini wokuhlanza ubuso we-ST.IVES unenani elingu-120,000 VND ibhodlela elingu-170g.
2. Igwebu le-Innisfree Volcanic Pore elihlanzayo
Enye yemikhiqizo yezimonyo ephezulu edumile eKorea emkhakheni we-exfoliating. Ngezithako ezenziwe ngezithako ezintsha zaseJeju Island. Umkhiqizo ngokushesha wazuza ukwethenjwa kwabesifazane abaningi ekhaya nakwamanye amazwe. Phakathi kwazo kubalwa igwebu lokuhlanza i-Volcanic Pore elidumile.
Ngezithako eziyinhloko Umlotha wentabamlilo ovela esiqhingini saseJeju usiza ukumunca imisoco isusa ngokuphelele ukungcola namaseli afile ngempumelelo. Kanye nezithako eziyinhloko yi-tangerine peel, i-orchid, itiye eluhlaza … Umkhiqizo uletha ikhono eliphumelelayo lokulwa ne-oxidant, kanye nekhono le-antibacterial, ukwelapha amabala amnyama esikhumbeni.
Izithako ezilungile zemvelo kufanele zifanele bonke abasebenzisi.
Ikhono lokuhlanza elijulile eliphumelelayo
Ukulawula uwoyela okuhle kakhulu
Thuthukisa isimo sezinduna esikhumbeni
I-pH ephezulu kufanele ibangele isikhumba esomile.
Hhayi eyabantu abanesikhumba esibucayi, esomile nesivamile.
Njengamanje umkhiqizo uthengiswa ngebhodlela le-180,000 VND 150ml.
3. I-Muji Face Soap Scrub
Ngezithako eziyinhloko Imbewu ye-carotenoid inamandla amakhulu kakhulu e-antioxidant ukusiza ukunciphisa amandla amabhaktheriya okuhlasela isikhumba. Kanye nefomula equkethe izinhlayiya ze-hyaluronic acid ezikhishwe kumapentshisi, inomphumela omuhle kakhulu wokuthambisa. Ngesikhathi esifanayo, isusa ngokushesha amangqamuzana afile futhi idale ungqimba oluvikelayo lwesikhumba ukusiza ukuqinisa ukumelana kwesikhumba. Yondla isikhumba kusuka ekujuleni.
Ngekhono lokususa ngokuphelele amangqamuzana afile, ukungcola, i-sebum enamathela esikhumbeni. Ngaleyo ndlela kusiza ukukhulula ama-pores, ukunciphisa ama-blackheads, induna. Isiza isikhumba sibe bushelelezi futhi sicwebezele ngemuva kwezikhathi eziningi zokusebenzisa i-Muji Face Soap Scrub.
Izithako zemvelo ziphephile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba.
Amakhono okuhlanza ajulile.
Isiza ukususa i-sebum, ukungcola, amaseli afile ngokushesha nakancane
Intengo ifanele izinto eziningi
Isikhumba sizizwa siqinile ngemva kokusetshenziswa.
Intengo yomkhiqizo othengiswayo emakethe imvamisa ingu-195,000 ngebhodlela elingu-120g.
4. Utena Everish Exfoliating Cleanser
Isithako esiyinhloko yitiye elihlaza laseJapan kanye nama-walnuts asendle emvelo. I-Utena Everish Exfoliating Cleanser Inamandla okukhipha ngokuphelele amaseli afile, ukungcola, kanye ne-sebum ekujuleni kwama-pores. Ngakho-ke, umkhiqizo uwukukhetha okuhlakaniphile kwabathengi.
Kanye nekhono lokwenza mhlophe ngokwemvelo, ukuthuthukisa ukushelela kwesikhumba, ukuvimbela ukwakheka kwezinduna. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo uphinde unikeze abasebenzisi iphunga elimnandi elikwenza uzizwe uthanda ukuya endaweni ye-spa.
I-Utena Everish Exfoliating Cleanser Okufakwe ngezithako zemvelo ezinobungozi yitiye eliluhlaza namalahle acushiwe, i-aloe vera, i-walnut…
Ihlanza isikhumba ngokushesha nangokushelela ngaphandle kokushiya umuzwa owomile esikhumbeni.
Umkhiqizo ulungele zonke izinhlobo zesikhumba zabasebenzisi.
Ukhilimu ubushelelezi futhi awubangeli ukuqina kwesikhumba ngemva kokusetshenziswa.
Umsebenzi wokuhlanza ophelele wenza abasebenzisi banqobe.
Njengamanje umkhiqizo uthengiswa ngebhodlela elingu-200,000 VND 1 lika-130g.
5. AHA Geza Ukuhlanza
Ngesithako esiyinhloko i-papaya extract, enekhono lokuthambisa isikhumba ngokwemvelo. Isiza ukususa amaseli esikhumba afile ngokushesha nangokuphepha. Ngaleyo ndlela ngcono isikhumba esimhlophe, imibimbi futhi zinyamalale ngokuhamba kwesikhathi. Ngenxa yalokho, isikhumba sibukeka sincane.
Ngaphandle kwalokho, i-kiwi eluhlaza isiza ukuqinisa isikhumba ngokwemvelo, ukuthambisa isikhumba, ukuthuthukisa ukwakheka nokwenza isikhumba sibe mhlophe futhi sikhanye.
Ijusi ye-apula enezithako ezinovithamini C kanye nama-antioxidants emvelo asiza ukulawula ibhalansi ye-pH yesikhumba. Isiza isikhumba ukulawula i-sebum kangcono, ama-pores ahlanzeke, anciphise ngempumelelo izinduna namabala amnyama.
Izithako zemvelo ziphephile esikhumbeni kanye nobuhle obuphumelelayo
Ukuhlanzwa okujulile kwamaseli afile
Ikhono elingcono kakhulu lokulawula amafutha
Ukwesekwa okusebenzayo kokwelashwa kwezinduna
Ubuhle obumanzisa isikhumba esibushelelezi
Umkhiqizo udala igwebu eliningi
Udinga ukuvikela isikhumba lapho ubekwe elangeni
Umkhiqizo unenani eliphakeme kakhulu lamabhodlela angama-250,000 VND 120g
6. Abanye Nge Mi Cereal Pore FoamCrub
Lona omunye wemikhiqizo ethengiswa kakhulu emakethe yaseKorea ngenxa yekhono layo lokucwenga. Umkhiqizo unamandla okuhlanza okujulile, ukususa ngokuphelele ama-blackheads, wenze isikhumba sibe mhlophe futhi sikhanye. I-Exfoliating Facial Cleanser Ifaneleka kahle kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, isikhumba esinamafutha, isikhumba se-acne, isikhumba esihlangene singasetshenziswa.
Ngo-70% isici I-rice bran kanye nezinhlamvu zemvelo ezifana nesesame, ama-pecans, ama-chestnuts, ngakho-ke kungashiwo ukuthi lo mkhiqizo Iphephe kakhulu esikhumbeni ngokusetshenziswa kwe-exfoliating.
I-creamy granular texture isusa ngempumelelo ukungcola kanye ne-sebum
Inamandla okukhipha amaseli esikhumba afile, i-stratum corneum yobudala, futhi ithambise isikhumba ngobumnene
Iyaswamisa futhi ayisomisi isikhumba.
Ukulawula amafutha okuhle, nciphisa amafutha ebusweni
Umthelela onamandla awubafanele abantu abanesikhumba esibucayi.
Umkhiqizo njengamanje unenani eliphakeme kakhulu lama-320,000 VND ngebhodlela elingu-100ml.
7. I-CeraVe Renewing SA Cleanser
Kuthuthukiswe odokotela besikhumba nge Isithako esiyinhloko I-Salicylic Acid isiza ukuhlanza isikhumba ngezingqimba zokungcola, uwoyela, namaseli afile ngempumelelo. Kanye ne-hyaluronic acid, i-niacinamide kanye novithamini D wokufaka amanzi ngamakhono emvelo okukhanyisa isikhumba.
Ngalezi zithako, kusiza ukuhlanza isikhumba ngaphandle kokucasuka futhi kubangele ukungezwani komzimba esikhumbeni. Ukusuka lapho, kuyasiza ukwenza mhlophe futhi isikhumba esiphinki ngaphandle kwezinduna. Ngakho-ke, umkhiqizo ulungele bonke abasebenzisi, ngisho nesikhumba esibucayi.
Izithako ezinempilo ziphephile ukuthi zisetshenziswe isikhumba
Umkhiqizo awunawo ama-colorants noma amakha.
Ukuthungwa kwejeli eliwuketshezi kudala igwebu elincane futhi kusebenza kahle kakhulu uma kufakwa
Susa amaseli afile kanye ne-stratum corneum endala ukuze uvikele isikhumba emiphumeleni emibi.
Njengamanje, umkhiqizo uthengiswa nge-370,000 VND
8. I-Cetaphil Extra Gentle Daily Scrub
I-Cetaphil Extra Gentle Daily Scrub iwukugeza ubuso nsuku zonke ngezinhlayiya ezinosayizi omncane ukuze zingene zijule ezimbotsheni futhi zihlanzeke ngobumnene.
Ngezingxenye Ngokwemvelo kusiza ukususa ngokuphelele ukungcola, i-sebum, nokungcola okunamathiselwe ngokuqinile esikhumbeni. Ngaleyo ndlela kuthuthukisa isikhumba esibuthuntu ukuze sibe mhlophe ngokwemvelo. Ngesikhathi esifanayo, ifomula yokunakekelwa kwesikhumba nayo iqukethe amavithamini ukuze athambise futhi abushelele isikhumba.
Ikhipha ngobumnene ngaphandle kokumisa noma ukucasula isikhumba
Ithuthukisa ubuso besikhumba ukuze sibe nebala elinempilo, elikhanyayo, elibushelelezi
Ifomula enokhilimu ethambile elungele ukusetshenziswa nsuku zonke
Ayibangeli induna esikhumbeni
Ifanele izinhlobo eziningi zesikhumba, ngisho nesikhumba esibucayi kakhulu.
Indlela yokusebenzisa i-exfoliating face wash ephumelelayo
Nakuba imikhiqizo inezinzuzo eziningi ezilula enqubweni yokunakekelwa kwesikhumba, akusho ukuthi uhlukumeza umkhiqizo izikhathi eziningi. Ukuqinisekisa ukuphepha kwabasebenzisi, kufanele uqaphele ukusetshenziswa kahle kwesikhumba ngale ndlela elandelayo:
Sebenzisa kuphela inani elifanele lokuhlanza ngokusetshenziswa okukodwa. Ngoba uma usebenzisa kakhulu, izobiza futhi imoshe futhi ingasebenzi kahle esikhumbeni.
Qinisekisa ukuthi ulandela amasu okunakekela isikhumba afanele njengokukhihliza amagwebu ngaphambi kokufaka esikhumbeni, ukubhucunga umzimba kancane… futhi ukhumbule ukukwenza ngokucophelela emakhaleni, ebunzini nasezindaweni zesilevu. Sicela ugeze kahle ngamanzi ngemva kokusebenzisa isihlanzi sobuso. Ungahlikihli kakhulu ukuze ulimaze isikhumba.
Kufanele uyisebenzise ngokulinganayo ngemvamisa enkulu izikhathi ezi-3-4 ngesonto ukuze ugweme ukuqubuka kwesikhumba futhi ubangele ububomvu.
Yonke le mikhiqizo yokuhlanza ubuso engenhla ivela kumikhiqizo ehlonishwayo emakethe. Ithemba ngemikhiqizo ukugeza ubuso obucwebezelayo Nawa amanye amathiphu awusizo ukukusiza uthole umkhiqizo ofanele isikhumba sakho. Umugqa womkhiqizo ngamunye unezinzuzo zawo ezihlukile. Ngakho-ke, yiba ngumthengi ohlakaniphile ukuze ukhethe imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba engcono kakhulu ekulungele.
Xem Thêm Cung Sư Tử là tháng mấy? Con gì? Tất cả đặc điểm cung Sư Tử | Muasalebang
Bão sale Black Friday Hoàng Hà Mobile 2020 | Muasalebang